Dental Clinic Near Me | LATHA DENTAL CLINIC | Contact Us
Latha Dental Clinic ရဲ့တည်နေရာလေးကတော့ အမှတ် ၆၆၁၊ ပထမထပ်၊ လသာနှင့် မဟာဗန္ဓုလ လမ်းထောင့်၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် သွားနှင့် ခံတွင်းရောဂါများကို ကုသနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဖုန်း 01-371414, 095101483 သို့ ခေါ်ဆို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Best of Dental Services
လူကြားထဲ သွားပေါ်အောင်ပြုံးနိုင်ဖို့ သင့်သွားတွေဟာ မညီညာ ၊ ကျဲနေတာ ၊ သွားတွေထပ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လို့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေရပါသလား? Invisalign လို့ခေါ်တဲ့ အကြည်ရောင်သွားစွပ်လေးဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ သွားညှိလို့ရနေပါပြီ .. Invisalign ရဲ့ သာလွန်တဲ့အချက်တွေကတော့. . . ✅တစ်ခြားသွားညှိတဲ့ပုံစံတွေလို Bracket တပ်နေစရာမလိုပဲ အကြည်ရောင်အစွပ်လေးကိုလွယ်လွယ် ကူကူ တပ်ဆင်နိုင်တာကြောင့် သွားညှိထားခြင်းကို သိသိသာသာ မပေါ်လွင်စေပါဘူး။ ✅အစားစားချိန် သွားတိုက်ချိန်တွေမှာ အစွပ်ကို အလွယ်တကူ ခဏဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ✅အစွပ်ကို လွယ်ကူစွာဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါတယ်။ ✅ခေတ်မှီနည်းစနစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ကုသမှုအပိုင်းကို အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို သွားပိုင်ရှင်မျိုးတွေ အများဆုံးပြုလုပ်ကြသလဲ ? ✔️သွားကြားနေရာမရှိအောင် သွားထပ်နေတဲ့သူတွေ ✔️သွားကျဲနေတဲ့သူ ✔️ရှေ့သွား/အောက်သွား ထွက်ခြင်း ✔️အပေါ်မေးရိုးနှင့် အောက်မေးရိုး မညီတဲ့သူ ✔️အပေါ်သွားနှင့် အောက်သွား ဟနေတဲ့သူတွေ Invisalign ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ Latha Dental Clinic မှာ Invisalign ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တပ်ထားချိန် ၂နှစ်ခွဲ ကြာမြင့်မှာပါ ။ ကုသမှုအစမှာတော့ သင့်ရဲ့သွားနေရာ ရွေ့မှာဖြစ်လို့ အနည်းငယ် နာကျင်မှုမျိုးသာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုသုံးပြီး ကုသပေးတာကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာဝန်ကြီးတွေကသာ ကုသမှုပြုလုပ်ပေးမှာပါ ။ သွားအရမ်းထပ်ပြီး ညှိဖို့နေရာ လွတ်မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာသာ သွားနှုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဆရာဝန်ရက်ချိန်းအတိုင်း မပျက်မကွက်ပြသဖို့လိုပါတယ် ။ Best of Dental Services
သွားပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်တိုင်း အပြုံးလေးတွေအသက်ဝင်လှပစေဖို့ သွားလေးတွေဟာ ညီညာလှပနေဖို့ လိုပါတယ်နော်။
Hollywood Smile လို့တောင်တင်စားခေါ်ဝေါ်ရ တဲ့ Veneer ကုသမှုလေးကတော့ ရှိပြီးသား သွားလေးတွေအပေါ်ကနေ ညီညာလှပတဲ့ ကြွေသွားလေးတွေ ထပ်ကပ်လိုက်ပြီး ပြုံးလိုက်တိုင်း ယုံကြည်မှု ရှိရှိ နဲ့ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင်တွေလို အပြုံးတွေဟာ အသက်ဝင်လှပစေမှာပါ။
✅ဒီကုသမှုလေးကိုတော့ သွားကြဲ/သွားထပ်နေတဲ့သူတွေ ၊ သွားအရောင်မလှတော့တဲ့သူတွေ ၊ သွားပဲ့နေတဲ့သူ ၊ရှေ့သွားပိုးစားနေတဲ့သူ ၊ ရှေ့သွားအတိုအရှည် မညီတဲ့သူတွေ အများဆုံး ကုသကြပါတယ်။
Veneer ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ သွားအရောင်မညီမှာ ၊ Veneer ပြုလုပ်ထားတဲ့သွားပဲ သိသိသာသာ ထင်ရှားနေတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် Latha Dental ဆေးခန်းကနေ အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် သွားတွေနာခြင်း ၊ ကျဉ်ခြင်း ၊ သွားမျက်နှာပြင် ကြွေလွှာဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံး အနေအထားရအောင် အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ကုသပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သွားမြစ်အကြောထုတ် ( ROOT CANAL TREATMENT ) ဆိုတာကတော့ ပိုးစားပြီး ရောင်ယမ်းနေသော သွားများ၊ အလွန်အမင်း သွားကိုက်နေခြင်း၊ သွားအမြစ်ထိပ်တွင် ပြည်တည်နာဖြစ်နေခြင်း ၊ ပိုးစားပြီးပုပ်နေတဲ့ သွားရှိ အကြောများကို အကြောထုတ်ကိရိယာအသုံးပြုပြီး အကြောထုတ် ကုသခြင်းကို ဆိုပါတယ်။ အကြောသတ်ထားသည့်သွားကို ရောဂါပိုးပြန်မဝင်စေရန် နှင့် တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်မှုမရှိစေရန် သွားပြန်လည် ဖာပေးရပါမယ်။ ပြီးနောက် အကြောသတ်ထားသည့်သွားဟာ အမြစ်သေတဲ့ အပင်လိုပဲ အကြောမရှိတော့တဲ့ သွားဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကျွတ်ဆတ်မာကြောလာပြီး ပဲ့နိုင် ကွဲနိုင်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အကြောသတ်ပြီး တစ်လအတွင်း သွားတစ်ချောင်းထဲကို အစွပ် Crown ပြန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် ။
✔️✔️သို့မှသာ သွားကိုက်တိုင်း သွားနှုတ်နေစရာမလိုပဲ အကြောထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် သွားတစ်ချောင်း ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ရသလို အစားအစာများကိုလည်း ကျေညက်စွာ ဝါးနိုင်စားနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Latha Dental Clinic မှာတော့ သွားအကြောထုတ်ကုသမှုအတွက် သာမာန်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သည့် အကြောမျှင်လမ်းကြောင်းတွေကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း Microscope ဖြင့် အသေးစိတ်ကြည့်ရှုပေးပြီး လူနာနှင့် ကိုက်ညီမယ့် ကုသမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် Dental Check Up ဆောင်ရွက်ပေးပြီးမှသာ လိုအပ်သည့် ကုသမှုများပြုလုပ်ပေးနေပါတယ် ။
သွားညှိကုမှု ( Orthodontic Treatment ) ဆိုတာကတော့ သွားများကို ညီညာအောင် တိကျတဲ့ ဖိအားတစ်ခုဖြင့် သွားထိန်းတပ်ဆင်ပြီး သွားတွေရွေ့လျားလာတာနဲ့အမျှ မေးရိုးတွေကပါ လိုက်ရွေ့လာပြီး သွားညှိပေးတဲ့ ကုသမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သွားသာမက မေးရိုးတွေကိုပါ ညှိလို့ရပါတယ်။
ဘယ်လို သွားပိုင်ရှင်တွေ အများဆုံး တပ်ကြသလဲ?
🔻သွား Alignment မမှန်သည့်သူများ
🔻သွားထပ် ၊ သွားကျဲ ၊ သွားမညီမညာဖြစ်နေသူများ
🔻သွားတွေ တိုလွန်းခြင်း ၊ အဆမတန်ရှည်လွန်းသည့် သူများကတော့ သွားနှင့်မေးရိုးအလှအပအတွက် Brace ကို တပ်ဆင်ပြီး သွားညှိကြပါတယ်။
✅ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ သွားညှိကုသမှု ၃ မျိုးရှိပြီး အခု ရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ Fixed applianceကု သခြင်းလို့ ခေါ်တဲ့ Brace တပ်ပြီး သွားညှိတဲ့ အပိုင်းလေးပါ။
Brace ဆိုတာကတော့ metal အတုံးလေးများဖြင့် စတီးBracket တပ်ပြီးသွားညှိရာမှာ အသုံးပြုသည့် ကိရိယာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Traditional Brace နှင့် Damon Brace ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတဲ့အထဲကမှ မိမိနှင့် အဆင်ပြေတဲ့ သွားညှိကုသနည်းကို ဆရာဝန်များနှင့် အသေအချာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး တပ်ဆင်ကုသသင့်ပါတယ်။
Braceကိုတော့ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်မှစလို့ အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအထိ တပ်လို့ရပါတယ်။ Brace တပ်ပြီးသွားညှိမယ်ဆိုရင်တော့ သွားပုံစံအမျိုးမျိုးအလိုက် ၂ နှစ်မှ ၂နှစ်ခွဲလောက်အထိ ကြာကြာ တပ်ဆင်ထားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သွားညှိကုသမှု ခံယူခြင်းကြောင့် မေးရိုးနှင့်သွားများ ညီညာပြီး ပို၍လှပလာခြင်း ၊ စကားပီသစွာပြောနိုင်ခြင်း ၊ အစားအစာ ဝါးရတာ အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုရှိခြင်း ၊ ခံတွင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် ရောဂါများ ပျောက်ကင်း သက်သာစေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
✔️✔️Latha Dental Clinic တွင် သွားညှိကုသမှု ခံယူမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဦးဆုံး သွားရဲ့အခြေအနေကို ပြပြီး Dental Check Up ဆောင်ရွက်ပေးပြီးမှသာ လိုအပ်သည့် ကုသမှုများ အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အထူးသတိထားရမှာကတော့ သွားညှိကုသမှုတွင် ဆရာဝန် ရက်ချိန်းအတိုင်း အချိန်မှန် ပြန်ပြပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ် ။
Scaling Teeth (သွားကျောက်ခြစ်ပေးခြင်း)
နေ့စဉ်ပုံမှန် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ dental plaque ဟုခေါ်သော သွားချေးများသည်သွားခြေရင်းပတ်လည်မှာ ကပ်ညှိလာပြီး အချိန်ကြာလာသောအခါ ထုံးကျောက်များအနယ်ထိုင်ရာမှ မာကြောသောကျောက်များဖြစ်လာတက်ပါတယ် ။ ဒါကို သွားချေးကျောက်တည်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုး ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ သွားချေးကျောက်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းသည့် ကိရိယာဖြင့် သွားချေးတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်တာမျိုး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သွားဖြူစေတဲ့ Whitening ကုသမှုလေးဖြင့် သွားဖြူအောင်ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြူဖွေးလှပတဲ့ သွားလေးတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါနော်. . .
✔️သွားချေးကျောက်တွေအပြင် ကွမ်းဂျိုး ၊ ဆေးလိပ်ဂျိုး နှင့် သွားဝါတာကိုလည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားအောင် လေဆာဖြင့် ကုသလို့ရပါတယ်။
Denture ( အံကပ်တပ်ဆင်ခြင်း )
အံကပ်ကိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် သွားမရှိတော့သည့် အဖိုးအဖွားများ ၊ သွားအနည်းငယ်သာ ကြိုကြားကျန်ရှိသူများသာ အံကပ်အစားထိုး သွားအရှင်စိုက်ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ အံကပ်တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် အစာများ ပုံမှန်ကြေညက်စွာ ဝါးနိုင်ခြင်းကြောင့် အစာအိမ်နာရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။
အံကပ်အမာနှင့် အံကပ်အပျော့ဆိုပြီး အံကပ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ။
အံကပ်အမာကတော့ – အထူးသဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးသူများတပ်ဆင်ကြပြီး သံချိတ်ဖြင့် ဘေးသွားများကို သီတန်းထားတာကြောင့် သွားအများကြီးအတွက် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး မာကျောခိုင်ခံ့မှုရှိပါတယ် ။
အံကပ်အပျော့ကတော့ – အထူးသဖြင့် မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုကြောင့် သွားအစုလိုက်ကျိုးရတဲ့ လူငယ်များ၊ သွားအနည်းငယ်ကျိုးနေတဲ့သူများ သွားအသေမစိုက်ခင်စပ်ကြား ခဏယာယီ တပ်ဆင်တဲ့အခါမှာအံကပ်အပျော့ကို အလှအနေဖြင့် တပ်ဆင်ကြပြီး အံကပ်အပျော့ဖြစ်တာကြောင့် ဖြုတ်ရတပ်ရလွယ်ကူပြီး အံကပ်တပ်ထားမှန်း လုံး၀ မသိသာစေပါဘူးနော် ။ ။ အံကပ် တပ်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဆောင်ရွက်ရမယ့် အချက်တွေကတော့ ..
✔️✔️အစာစားပြီးတိုင်း အံကပ်ဖြုတ်ပြီး ရေနှင့်ဆေးကြောပေးခြင်း ၊ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း အံကပ်နှင့် အံဖုံးများကို သွားတိုက်ဆေးဖြင့် တိုက်ပေးခြင်း ၊ အံကပ် အံဝင်ခွင်ကျရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။
✔️✔️မိမိနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့် အံကပ်များကို တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် ဆရာဝန်များနှင့် ပြသပြီးမှသာ ကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။
Latha Dental Clinic ကတော့ သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို အတွေ့အကြုံရင့်ဆရာဝန်ကြီးများဖြင့် ကုသပေးလျှက်ရှိတာပြီး အချက်အချာကျသည့် လသာမြို့နယ်တွင် ဆေးခန်းတည်ရှိတာကြောင့် သွားလာရ လွယ်ကူစေပါတယ် ။
👨‍⚕️သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး ပိုးသတ်ထားသည့် အဆင့်မြင့် စက်ကိရယာများဖြင့် ကုသပေးလျှက်ရှိပါတယ် ။